နေပြည်တော် မေလ 5, 2019
DSECERIPTION: La Société RAINBOW SECURITY recrute des Agents de Sécurité pour les zones de Village et YASSA. Qualités requises. Sang-froid, autonomie, autorité, bonne condition physique… Loin d'être accessible à tout le monde -…
ဟိုတယ်ည R ည့်ခံများအတွက်ယောဘကမ်းလှမ်းသည်
DESCRIPTION: Recherche d'un réceptionniste de nuit pour un hôtel Salaire : 60000F Lieu : Douala Grand Moulin - avoir au minimum 23 ans - avoir au minimum niveau Bac - savoir lire et écrire en français, le bilinguisme serait un…
မြောက်ကိုရီးယားထိုညဉ့်အများအပြား Short-range ကိုဒုံးကျည်ဖြင့်ပစ်ခတ်
နေပြည်တော် မေလ 4, 2019
La Corée du Nordatiré cette nuit plusieurs missiles à courte portée @ Kirill KUDRYAVTSEV / AFP International TENSION - La Corée du Nordatiré samedi plusieurs missiles à courte portée. Les missiles ont parcouru entre 70 et 200 km au…
PSG အသင်း: Ligt FOR THE ဘာစီလိုနာယူအစွန်းရောက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရ
Mercato - PSG : Cette décision radicale prise par le Barça pour De Ligt ! Publié le4mai 2019 à 14h45 par A.C. Le FC Barcelone semble prêt à tout miser sur Matthijs de Ligt, capitaine de l’Ajax Amsterdam également suivi par le Paris…
သူသည်ဤတံတားပေါ်မှကလေး ၃ ခုကိုချိန်ခွင်လျှာညှိပြီးသောနောက်တံတားထိပ်မှစတင်သည်။
DRAME Une femme se suicide avec ses3enfants (elle jette d'abord ses enfants du haut d'un pont, et puis elle-même) à cause des problèmes de son foyer. Elleavoulu quitter son mari à plusieurs reprises mais ses parents s'y opposaient…
နှမ်းလုပ်ငန်းရှင်များ Finance ကြည့်ရပ်ရန်
နေပြည်တော် မေလ 2, 2019
ဖော်ပြချက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘဏ္financeာရေး၊ အီလက်ထရောနစ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အတူကင်မရွန်းနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးရှုခင်းတွင်အဓိကကစားသမားတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလိုင်း၏လှုပ်ရှားမှုများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ...
စီမံခန့်ခွဲမှုလွှဲပြောင်းအခကျြမြားလိမ္မော်ရောင်ငွေ MTN လို
ဖော်ပြချက် BATA NLONGKAK inရိယာအတွင်းရှိ OM / MoMo လွှဲပြောင်းဌာနတစ်ခုမှမန်နေဂျာတစ် ဦး ကိုကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ် ဦး ကိုခေါ်ယူစုဆောင်းနေပါသည်။ စိတ် ၀ င်စားသောအဖွဲ့များသည်ဤနေရာနှင့်မဝေးပါ၊ ၁၀၀F တွင်အငှားယာဉ်အများဆုံးစီးနင်းရပါမည်။ အဘို့…
vas သို့မဟုတျလောက? ဘာကြောင့်လဲဤမျှလောက်များစွာသောဒုစရိုက်အပြစ်သည်
နေပြည်တော် မေလ 1, 2019
ဘဏ္CARာရေးဆိုင်ရာ CARE Consulting တွင်စာရင်းကိုင်များနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်အလုပ်အကိုင်
ဖော်ပြချက် CLASS JOB အစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် FINANCIAL CARE CONSULTING သည်စာရင်းကိုင်မန်နေဂျာ ၅ ဦး နှင့်လုပ်ငန်း ၅ နာရီကိုအလုပ်ချိန်နှင့်အညီသတ်မှတ်ထားသည့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ရှိလိမ့်မည်။
POLYTECH ခွန်အားကို AT စုံစမ်းစစ်ဆေး Internship ကမ်းလှမ်းချက်
နေပြည်တော် AVR 30, 2019
SURVEYORS တွင် INGEC ၏မှတ်ပုံတင်ကြေငြာချက် (04) ကုမ္ပဏီ၏အတိုချုပ်တင်ဆက်မှု POLYTECH-VALOR ကုမ္ပဏီသည်စီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားအုပ်စုဖြစ်ပြီး Ecole Nationale Supérieure Polytechnique ၏ပြည့်စုံသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သော 1 ... 155 156 157 158 159 ... 166 လာမယ့်